Somaliland: Hormuudka Dunida Ee Adeegga Lacagta Mobil-ka | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Somaliland: Hormuudka Dunida Ee Adeegga Lacagta Mobil-ka
World Street Journal (SDWO): Somaliland Sicir barar xad-dhaafa iyo go’doomin dhaqaale ayaa u jiheeyay Jamhuuriyaddan aan la aqoonsan ee dhaqaalaheedu hooseeyo inay ku talaabsato guul la taaban karo oo ay kaga horreyso waddamo badan oo calaamka ah: “Dhaqaale bilaa kaash ah”.
Adeega lacagta mobilada ayaa aad u horumaray tobankii sano ee lasoo dhaafay gaar ahaan qaaradda Africa; 10kii qofba qof ayaa isticmaala taas oo u dhiganta in qaaradda ay ka isticmaalaan 100 milyan oo qof.
Waddanka Kenya ayaa hirgeliyay adeega M-pesa, kaas oo guud ahaan loo aqoonsan yahay inuu yahay adeegii ugu horreeyay ee adeega lacagta mobilada oo si dhaba u hirgelay, isla markaana waxa macmiil u ah 26 milyan oo ah kala badh dadweynaha ku dhaqan wadanka Kenya.
Cilmi baadhis ay sameeyeen McKinsey & Co ayaa caddaysay in kala badh adeegyada lacagta mobilada ee dunidu ay ka shaqeeyaan wadamada dhaca koorfurta lama-degaanka Saharaha ee Afrika.
“Aniga musharkaygu wuxu iigu soo dhacaa Zaadka, kaashna waxaan isticmaalaa oo keliya markaan waayo adeega Zaad”. Sidaa waxa yidhi Qaasim Cali oo ka shaqaysta supermarket ku yaala casimadda Somaliland ee Hargeisa.
“Waxaan doorbidaa Zaadka waayo lacagta ayuu kuu fududaynayaa, waxaanay hoos u dhigaysaa in lagu dhaco”
Guusha adeega lacagta moobilada ee Somaliland waxaad ka arkaysaa suuqyada iyo waddooyinka mashquulka ah ee magaaladda Hargeisa halkaasoo aad ku arkayso sarriflayaal saf saf u fadhigay oo ay hor tuulan tahay lacag kaash ah, taas oo ku jirta joonyado ama saxaarad shabag ah oo dhamantood sarrifaya lacagaha kala duwan.
Si ay macaamiisha u gaadhsiiyaan kaashka ay rabaan waxay inta badan sarriflayaashu shaqaalaysiiyaan gacanyare lacagta ku qaada kaaryoone kaas oo lacagta kolba halkii la rabo geeya.
Zaad iyo adeegyada lacagaha ah ee cusub ayaa laf dhabar u ah inuu shaqeeyo oo horumaro dhaqaalaha Somaliland, dareenka wadaniyadeed ee mulkiilayasha adeegan ayaa aad u sarreeya taas oo sababtay inay adeegan dhamaantii ka dhigaan mid bilaa lacag ah oo bilaasha.
Hadaad eegto wadamada kale Africa ee adeegan bixiya waxaad arkaysaa siduu qaali u yahay adeegani waayo waxay ka qaadaan khidmad dhan 10% 1kii dollarba (10% per 1 dollar).